Nepali Rajneeti | लाशलाई राति एक्लै किन छाडिदैन ? यस्तो छ रोचक कारण !
अषोज २८, २०७८ बिहिबार १९ पटक हेरिएको
काठमाडौँ ।केही पौराणिक मान्यता अनुसार कहिले पनि व्यक्तिको अन्तिम संस्कार रातमा गरिँदैन। यदि कुनै व्यक्तिको मृत्यु राति भएमा उसलाई राति नै मसानघाटमा लगिँदैन ।
उपायः केतुको अशुभ प्रभावबाट बच्नको लागि रातो चन्दनको माला अभिमंत्रित गरेर शुक्लपक्षको पहिलो मंगलबार धारण गर्नुपर्छ।
जन्मकुण्डलीमा केतु दोष रहेकाले भगवान शिव जीको पूजा- अआराधना गर्नु पनि लाभदायक हुन्छ। यो खबर सामाजिक सञ्जालबाट साभार गरियको हो ।